Faah-faahino dheeraad ah oo ka soo baxa weerar ay Al-Shabaab ka geysteen G/Waqooyi Bari – Hornafrik Media Network
Faah-faahino dheeraad ah oo ka soo baxa weerar ay Al-Shabaab ka geysteen G/Waqooyi Bari
Waxaa faahfaahino laga helayaa weerar jid-gal ah oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku qaadeen gaari Bus ah oo kusii jeeday magaalada Mandhera ee gobolka Waqooyi bari dalka Kenya.
Weerarkan oo dhacay salaadii Makhrib kadib ee xalay ayaa la xaqiijiyey in Al-Shabaab ay ku qaadeen baska rakaabka ahaa oo ay laheyd shirkad lagu magacaabo Madina oo ka howlgasha gudaha dalka Kenya waxuuna gaarigu marayey inta u dhaxeysa deeganaada Kutulo iyo Wargadud ee Wajeer.
Taliyaha booliska Wajeer Stephen Ng’etich ayaa wargeyska Daily Nation u xaqiijiyey weerarkan, hase yeeshee ma uusan shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha, balse ciidamada gaarka ah loo diray goobta weerarka uu ka dhacay.
“Waxaan xaqiijin karaa in koox hubeysan ay fiidkii jidka u galeen oo ay weerareen baska oo kusii socday Mandhera, balse weli ma hayno xog ku saabsan tirada khasaraha,” ayuu yiri.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerarka, ayaa war ay ka soo saareen ku sheegay inay ku dileen 10 qof oo aan muslim aheyn.
Qoraal lagu baahiyey warbaahinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri in “kadib baaritaanno lagu sameeyey dadkii saarnaa gaariga ay u kala qeybiyeen muslimiin iyo gaalo kadib la dilay 10 qof oo la xaqiijiyey inay gaalo ahaayeen, goobta lagu toogtay tobanka ruux ee gaalada ahaa, iyadoona dadkii kale ee muslimiinta ahaa la sii daayay”.
Al-shabaab ayaa horay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya uga geystay weerarro nuucaan ah, waxayna arintaasi cabsi badan ku abuurtay dadka aan muslimka aheyn eek u safra dhulka u dhaxeeya magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo gobolka ay Soomaalidu degto ee Waqooyi Bari.
Sheekh Umal: Madaxweyne lagaa dhigan maayee Ilaahey u towbad-keen inta aadan dhiman
Roobab xoog leh oo ka da’ay gobolada Puntland iyo dad laga soo badbaadiyey